Okwu Mmepe Okwu Gburugburu na WordPress | Martech Zone
Satọde, 28 Juun 2014 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Ọchịchọ maka mmepe WordPress na-aga n'ihu na-eto ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa anyị niile nwere ma ọ bụ saịtị WordPress ma ọ bụ agbakwunyere WordPress blog. Ọ bụ nkwalite siri ike - ọ bụghị mmadụ niile hụrụ ya n'anya mana enwere ọtụtụ isiokwu, plugins, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmepe na ọ nwere ezi uche. Ikike igbanwe ọnụnọ weebụ gị na-enweghị ikpochapụ ikpo okwu ma maliteghachi bụ naanị nnukwu uru.
Ọ bụrụ n’inwere saịtị WordPress ị kpọrọ asị, ma ọ bụ na enweghị ike ịme ya ka ọ rụọ ọrụ ịchọrọ - naanị chọta akụ nwere ike idozi ya maka gị. Ntinye WordPress dị naanị ka ndị mepụtara isiokwu gị na plugins.
Anyị enweela nnukwu ọchịchọ na anyị ga-echigharịkwuru ndị ọrụ na ndị na-arụ ọrụ ngo na-atụgharị faịlụ Photoshop gaa na isiokwu, ma ọ bụ na anyị zụtara isiokwu sitere na ọrụ ndị ọzọ. Anyị hụrụ Themeforest n'anya n'ezie maka ogo ya na nhọrọ ya (nke ahụ bụ njikọ njikọ anyị). Isi okwu, ị gaghị enwe ike idezi faịlụ isiokwu ọ gwụla ma ị na-eme ihe siri ike na isiokwu ahụ. Ọdịnaya niile - ibe, posts, na edemede, kwesiri ịhazi ya site na nchịkwa isiokwu gị.
Mgbe anyị nwere isiokwu mepụtara ma ọ bụ na anyị zụtara otu, agbanyeghị, anyị na-ahụkarị nsogbu ndị a:
Ngalaba kama Omenala Post Types - Mgbe ụfọdụ, saịtị ndị ahụ nwere ngalaba dị iche iche - dịka Akụkọ, Akụkọ Mgbasa Ozi, Ndepụta Ngwaahịa, wdg. Nke na-arụ ọrụ nke ọma na usoro ịde blọgụ ebe ị nwere peeji ndeksi, ibe akwụkwọ yana otu peeji iji gosipụta ọdịnaya zuru ezu. Agbanyeghị, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ndị mmepe isiokwu na-ụzọ mkpirisi usoro mmepe na hardcode ka ị nwee ike iji blog biputere ọdịnaya a. Nke a bụ mmejuputa iwu jọgburu onwe ya ma ọnweghị uru nke WordPress Post Custom Types. Nakwa, ọ bụrụ na ịhazigharị edemede gị - ị kposara n'ihi na isiokwu a na-abụkarị nke siri ike. Anyị na-abanyekarị, mepee ụdị post posta omenala, wee jiri ngwa mgbakwunye iji gbanwee ụdị nke posts na ụdị post post omenala.
Ubi Omenala na-enweghị Advanced Fields Field - Ọ na - eju m anya na WordPress azabeghị Ozi Ọdịmma Ntanetị ma tinye ya na ngwaahịa. Ọ bụrụ na ịnwere post chọrọ ozi ọzọ - dị ka vidiyo, adreesị, maapụ, iframe, ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ, ACF na-enye gị ohere ịhazi ntinye nke ihe ndị ahụ n'ụzọ dị omimi na isiokwu gị ma mee ka ha chọọ, defaulted, ma ọ bụ nhọrọ . ACF kwesiri inwe ma kwesiri iji ya karie Ogige Omenala n'ihi ikike o na-enye banyere isi okwu gi. Chọrọ vidiyo agbakwunyere na ibe obibi? Tinye a omenala ubi na-egosiputa na a meta igbe na ebe obibi gị na peeji nke editọ.
Nhazi usoro - WordPress nwere nchịkọta akụkọ isiokwu dị mkpa anyị ga-eji oge ụfọdụ mgbe ndị ahịa anaghị enye anyị ohere FTP / SFTP iji dezie faịlụ. Enweghị ihe ọ bụla dị ka iwe dị ka ịzụta isiokwu na enweghị ụzọ iji dezie ụdị, isi, ma ọ bụ n'okpuru n'ihi na ha bugara faịlụ ndị ahụ na folda nchekwa. Hapụ faịlị na mgbọrọgwụ folda isiokwu ahụ! Ọ gwụla ma ị tinyere ụfọdụ usoro ndị ọzọ, ọ nweghị mkpa maka usoro nchekwa folda niile. Ọ dịghị amasị na ị ga-enwe ọtụtụ narị faịlụ na folda isiokwu nke ịnweghị ike ịchọta.
Sidebars na wijetị - havingnweghi akụkụ n’akụkụ iji tinye wijetị n’isiokwu gị niile bụ ihe na-akụda mmụọ… na ị overụbiga mmanya oke na wijetị maka ihe kwesịrị ịdị mfe nhọrọ dịkwa nkụda mmụọ. A sidebar ga-ejedebe na ọdịnaya nke na-agbanwe agbanwe n'oge ụfọdụ n'ime ụdị peeji nke isiokwu gị mana emelitere oge. O nwere ike ịbụ Calling To-Action n'akụkụ nke ọdịnaya gị. Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ mgbasa ozi ịchọrọ igosipụta mgbe ọdịnaya ahụ gachara. Mana ọ bụghị ogwe aka na wijetị naanị iji gosipụta nọmba ekwentị, dịka ọmụmaatụ.
Nhọrọ siri ike - Njikọ mmekọrịta, onyonyo, vidiyo, na ihe ọ bụla ọzọ kwesiri ịwube ya n'ime nhọrọ isiokwu nke enwere ike ịpụpụ ngwa ngwa. Enweghị ihe ọ bụla dị ka njọ dị ka ịbanye na faịlụ faịlụ isiokwu iji gbakwunye njikọ profaịlụ mmekọrịta na 10 dị iche iche. Tinye peeji nhọrọ (ACF nwere mgbakwunye) ma tinye ntọala niile ebe ahụ ka ndị ahịa gị wee nwee ike itinye ha ma ọ bụ gbanwee ha mgbe ị na-ebute isiokwu ahụ ma na-aga.
Ihe ndeputa ihe banyere gi bu menu - WordPress na-ejibu ngalaba njikọ wee mechaa kpochapụ ya n'ihi na menu bụ ụzọ zuru oke iji mejuputa ndepụta nke njikọ nke akụ na ụba ma ọ bụ nke mpụga. Anyị na-ahụkarị otu menu ahọpụtara n'ọtụtụ ebe na saịtị, ma ọ bụ anyị na-ahụ ndepụta ndị egosipụta na wijetị sidebar. Ọ bụrụ na ndepụta bụ a na-adịgide adịgide na ọnọdụ na kehoraizin, vetikal, ma ọ bụ hierarchical… ọ bụ oge maka menu.
Index na peeji Peeji - E kwesịrị idebe peeji ndeksi maka blọọgụ gị ma depụta ihe ndị ị na-emepụta. Y’oburu n’acho inwe ihu-akwukwo omenala nke abughi ihe ntinye akwukwo, ikwesiri itinye ihe Ihu ihu template peeji n'ime isiokwu gi. Nlekọta> Ntọala ntọala n'ime WordPress na-enye gị ohere ịtọ peeji nke ịchọrọ ka ọ bụrụ ihu ihu gị na ibe ị chọrọ ịnwe dị ka ibe blog gị… jiri ha
anabata - Isi okwu obula kwesiri ibu na-anabata ọkwa dị iche na obosara nke plethora nke nlele ndị mmadụ na-eji ekwentị mkpirisi, mbadamba, kọmpụta, na ihe ngosi buru ibu. Ọ bụrụ na isiokwu gị anaghị anabata, ị na-emerụ onwe gị ahụ site na ịnyeghị ahụmịhe dabara adaba na ngwaọrụ eji. Ma ị nwedịrị ike imerụ onwe gị ahụ site na ịghara ịnweta okporo ụzọ ọchụchọ mkpanaka na saịtị gị.
Omume ọzọ anyị na-amalite ịhụ bụ ndị mmepe isiokwu na ndị na-ere isiokwu tinyere gụnyere mbubata mbubata WordPress ka ị nwee ike ịnweta saịtị ahụ ịrụ ọrụ dịka ọ dị mgbe ịzụrụ ya - mgbe ahụ ị nwere ike ịbanye ma dezie ọdịnaya ahụ . Zụta na ịwụnye isiokwu - wee hụchalụ ibe enweghị oghere na enweghị nnukwu ihe na atụmatụ atụmatụ isiokwu ahụ na-eme ka njọ. Usoro mmụta dị iche na isiokwu dị mgbagwoju anya na ndị mmepe na-emejuputa atụmatụ dị iche iche. Nnukwu akwụkwọ na ọdịnaya mbido bụ ụzọ dị mma iji nyere ndị ahịa gị aka.
Tags: omume kacha mmaigeOmenala ubiụdị post ụdịmmepe mmepemmehie isiokwuisiokwu mkpado
Jun 29, 2014 na 10:55 AM
Ọzọ dị ukwuu post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta, enwere m nnukwu ọgụgụ! ..